सुहागरातमा श्रीमतिलाई देखेर उड्यो होस, भाउजुलाई बताएपछि मच्चियो सनसनी! – PathivaraOnline
Home > समाज > सुहागरातमा श्रीमतिलाई देखेर उड्यो होस, भाउजुलाई बताएपछि मच्चियो सनसनी!
सुहागरातमा श्रीमतिलाई देखेर उड्यो होस, भाउजुलाई बताएपछि मच्चियो सनसनी!
admin September 6, 2020 समाज	0
भारतको कन्नौजमा शनिबार अचम्मित गरिदिने घटना सार्वजनिक भएको छ यहाँका एक बेहुलाले जब सुहागरातमा आफ्नी दुलहीलाई देखे तब उनको होस उड्यो । अर्को दिन उनले यसबारे भाउजुलाई बताए तब हंगामा मच्चियो । गाउँमा पञ्चायतपछि महिला पक्षले कान्छी छोरीसँग विवाह गराइदिने बाचा गरेका थिए ।
कानपुर देहात इलाकामा यो घटना भएको हो । यहाँका एक युवकको विवाह मे १३ मा भएको थियो । सुहागरातमा युवकले उनकी श्रीमती ट्रान्सजेन्डर भएको थाहा पाए जसले उनलाई झट्का दिलायो । यो कुरा युवकले गएर आफ्नी भाउजुलाई सुनाए । त्यसपछि केटीपक्षलाई बोलाइयो र मुद्दालाई गोप्य ढङ्गले सुल्झाउने कोसिस सुरु भयो ।
युवकलाई उनका ससुराले उनको दोस्रो विवाह उनकी कान्छी छोरीसँग एक महिनाभित्र गराउने बचन दिए । एक महिना बित्दा पनि विवाह नभएपछि यस घटनाबारे पर्दाफास भएको हो । युवकले पुलिस थानामा यसबारे मुद्दा दर्ता गरेका छन् । पुलिसले दुबै पक्षबिच सम्झौता गर्ने कोसिस गरिरहेको छ ।
खुशीकाे खबरः बाग्मती उपसभामुख राधिका तामाङले जितिन कोरोना!
राजधानीका जिल्ला प्रमुखहरूकाे गुनासोः क्वारेन्टाइन निर्माणदेखि शव व्यवस्थापनमा बाधा आए
-यापर साकार अधिकारी होटलबाट प्रहरी नियन्त्रणमा लिएपछि यस्तो बोले (भिडियो सहित)
राजधानीमा पाँचाैं पण्डित सम्मेलन हुदै, के गर्लान हिन्दु बिरोधीहरूले?
सोनिका बिरामी हुँदा फुलको बुकी बोकेर भेट्न गए पारस! सलोनमा पुग्दै गर्दा जे देखियो (भिडियो सहित)